पुरानो नियमका पुस्तकहरू – Word of Truth, Nepal
हामीले सँधै येशूले परमेश्वरको वचनको बारेमा के भन्नुभयो भनी सम्झना गर्नुपर्दछ: “तपाईंको वचन ____________ छ” (यूहन्ना १७:१७)। २ राजाको पुस्तकमा हामीले सिक्यौं कि योना वास्तविक मानिस थिए जो दुष्ट राजा यारोबाम दोस्रो (इस्राएलको राजा)को समयमा जिएका थिए। २ राजा १४:२५ मा हामीले यी शब्दहरू पढ्न सक्छौं: “परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरले आफ्ना दास अर्थात् गत-हेपेरबाटका अमित्तैका छोरा ________ भविष्यवक्ताद्वारा बोल्नुभएको उहाँको वचनअनुसार…..”। यारोबाम वास्तविक राजा थिए (२ राजा १४:२३)। इस्राएल वास्तविक जाति थियो र योनाचाहिँ केवल विचारको कुनै काल्पनिक पात्र थिएनन्। उनी वास्तविक बुबा भएका र वास्तविक शहरबाट आएका एक वास्तविक अगमवक्ता थिए।
के यो मानिस योना वास्तवमै विशाल सामुद्रिक जनावरद्वारा निलिएको हो त? योना र व्हेल (whale) माछाको बारेमा येशू आफैंले भन्नुभएको कुरालाई हेरौं, “किनकि जसरी योना ____________________________________ तीन दिन र तीन राज थिए……” (मत्ती १२:२०; योना १:१७सित तुलना गर्नुहोस्)। योनाको घटना वास्तवमै घटेको कुरालाई के येशूले विश्वास गर्नुभयो? _________। योनाले वास्तवमै नीनवेका मानिसहरूकहाँ गएर प्रचार गरेको कुरालाई के येशूले विश्वास गर्नुभयो (मत्ती १२:४१)? _____________। येशूले भन्नुभयो! मैले विश्वास गरें। समस्या समाधान भयो! योनाको घटना आश्चर्यजनक, चाखलाग्दो र रमाइलो मात्र छैन, तर यो सत्य पनि छ!
योना १:१७ पढ्नुहोस्। ठूलो माछाको पेटमा योनाको बसाइ एउटा चिन्ह थियो! यो चिन्हले संसारकै ठूलो घटनालाई औंल्याइरहेको थियो। येशूले यो चिन्हको बारेमा मत्ती १२:३९-४० र मत्ती १६:४ मा बोल्नुभयो। मत्ती १२:४०का शब्दहरूलाई ध्यान दिनुहोस्—“जसरी योना … उसरी नै मानिसका पुत्र”। योना ठूलो व्हेल (whale) भित्र थिए; येशू पृथ्वी भित्र हुनुहुन्थ्यो। तीन दिनपछि योना बाहिर आए; तीन दिन पछि येशू फेरी जीवित हुनुभयो, र विजयकासाथ चिहानबाट बाहिर निस्कनुभयो! ठूलो माछा भित्र र बाहिरको योनाको अनुभव येशू ख्रीष्टको बौरिउठाइलाई औंल्याउने एउटा स्पष्ट चिन्ह थियो! योना माछाको पेटबाट बाहिर निस्केर आएपछि, परमेश्वरको सन्देश अन्यजातिहरू (अश्शूरी) माझ गयो। येशू मरेकाहरूबाट बौरेर उठ्नुभएपछि, परमेश्वरको सन्देश अन्यजातिहरू (सारा संसारमा—मर्कूस १६:१५) माझ गयो। आज बाँचिरहेका हरेक विश्वासी सबै मानिसहरूका निम्ति परमेश्वरको प्रेम र वास्ताको जिउँदो प्रमाण हो! परमेश्वरको प्रेम असिमित छ (सबैकहाँ फैलिएको र बढ्दैगरेको), सिमित छैन (थोरैको निम्ति मात्र सिमित)।
१) धार्मिकताको बदली रीतिरिवाजहरू होइनन्। रीतिरिवाजहरू भनेको भित्री रूपमा ठीक नभइ बाहिरी कृयाकलापबाट भएर जानु र बाहिरी रूपमा “धर्मी” बन्नु हो। परमेश्वरले भित्रपट्टि र बाहिरपट्टि धार्मिकता भएको चाहनुहुन्छ। मीकाको दिनहरूमा यहूदीहरू निकै धार्मिक थिए तर उनीहरू धर्मी भने थिएनन् (यशैया १ अध्याय पढ्नुहोस्)। परमेश्वरले उहाँसँग ठीक हृदय र ठीक सम्बन्ध भएको चाहनुहुन्छ: “हे मानिस, असल के हो, सो उहाँले तिमीलाई बताइदिनुभएको छ; अनि _______________ काम गर्नु, ___________ प्रेम गर्नु र _______________ आफ्ना परमेश्वरको साथमा हिँड्नुबाहेक परमेश्वरले तिमीबाट अरू के कुरा चाहनुहुन्छ र?” (मीका ६:८—यस पुस्तकको चाबी पदहरूमध्ये एउटा)।
२) पापले निश्चित इन्साफतर्फ डोर्याउँदछ। पापले (मानिसको गलत आचरण र व्यवहार) परमेश्वरको इन्साफतर्फ डोर्याउँदछ। परमेश्वरले पापलाई आशिष दिन सक्नुहुँदैन; उहाँले यसको इन्साफ गर्नै पर्छ! जब मानिसहरू परमेश्वरको विरुद्धमा जाँदछन्, परमेश्वर तिनीहरूको विरुद्धमा जानै पर्छ। अटुट पापले पक्का विनाशतर्फ लान्छ! के मीकाको दिनहरूमा यहूदीहरूको समस्या पापसँग थियो? __________
३) मानिसको समस्याको निम्ति परमेश्वरसँग समाधान छ। मानिसको समस्याको निम्ति परमेश्वरसँग भएको सामाधान मुक्तिदाताको व्यक्तित्वमा पाउन सकिन्छ जो एकदिन बेतलेहेमबाट आउनुहुनेछ (मीका ५:२)! उहाँ आज मानिसको हृदयमा राज्य गर्न चाहनुहुन्छ (मीका ६:८) र भविष्यमा उहाँले सम्पूर्ण पृथ्वीमाथि पनि राज्य गर्नुहुनेछ (मीका ४:१-७—राज्य!)।
४) परमेश्वर माफी दिन र क्षमा दिन आनन्दित बन्नुहुन्छ। परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ तर उहाँले पापीहरूको आत्मालाई प्रेम गर्नुहुन्छ! मीका ७ अध्यायमा कुन पदले परमेश्वर माफी दिनुहुने र क्षमा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी हामीलाई देखाउँछ? ___________ हामीले योना ४:१ मा परमेश्वरको बारे यही कुरा सिक्यौं!
मीका ३:१—“अनि मैले भनें: … म तिमीहरूलाई विन्ती गर्दछु, ________!”
परमेश्वर सहनशील हुनुहुन्छ…तर
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:44:422020-04-28 14:35:01योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सपन्याह
आत्मिक गिरावटका समयहरूमा इस्राएल जातिलाई आफ्नो सन्देश सुनाउनका लागि परमेश्वरले उठाउनुभएका व्यक्तिहरू ‘अगमवक्ता’ कहिलिन्थे (पाँचौं अध्याय हेर्नुहोस्)। परमेश्वर यी मानिसहरूद्वारा बोल्नुभयो। ती अगमवक्ताहरूले परमेश्वरको सन्देश बताउनुपर्दा, उनीहरूले कतिपटक यसरी घोषणा गर्थे, “परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ!” अनि त्यसपछि आफ्नो सन्देश बताउँथे। अगमवाणीका विभिन्न पुस्तकहरूमा पल्टाएर हेर्नुहोस् र निम्न उल्लेखित वाक्यांशहरूलाई भेट्टाउन खोज्नुहोस्:
“परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो”
धेरैजसो अगमवक्ताहरूले आफ्ना पुस्तकहरू निर्वासनअघि लेखे (हेर्नुहोस् अध्याय १ – मुकुट)
इजकिएल र दनियलले आफ्ना पुस्तकहरू निर्वासनकै समयमा लेखे (हेर्नुहोस् अध्याय १ – कैद)
हग्गै, जकरिया र मलाकीले आफ्ना पुस्तकहरू निर्वासनपछि लेखे (हेर्नुहोस् अध्याय १ – निर्माण)
आज त्यस्ता धेरैजना छन् जोहरू यशैयाको पुस्तकलाई दुई भागमा चिर्न खोज्दैछन्! ती अविश्वासीहरू भन्छन् कि त्यहाँ कम्तीमा पनि “दुईजना यशैयाहरू” (दुईजना लेखकहरू) भएकै हुनुपर्छ। पुस्तकको पछिल्लो आधा भाग (अध्याय ४०-६६) लेख्ने व्यक्ति पुस्तकको अघिल्लो आधा भाग (अध्याय १-३९) लेख्नेभन्दा बेग्लै व्यक्ति हुनुपर्छ भनी दावी गर्छन् उनीहरू। उनीहरूको दावीअनुसार, यशैयाको दोस्रो भाग लेख्ने व्यक्ति यशैया अगमवक्ताको समयभन्दा २०० वर्ष अगाडि जिएको हुनुपर्छ।
यी अविश्वासीहरूले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बुझिरहेका छैनन् । जीवित परमेश्वरले “______________को कुरा ___________देखि नै” बताउन सक्नुहुन्छ (यशैया ४६:१०) अनि कोरेसको बारेमा परमेश्वरलाई ऊ जन्मनुभन्दा सयौं वर्ष पहिलेदेखि नै थाहा थियो!
यशैयाको पुस्तक एउटा “सङ्क्षिप्त बाइबल” जस्तै छ। बाइबलमा कतिओटा पुस्तकहरू छन्? ______________। यशैयामा कतिओटा अध्यायहरू छन्? _____________। यशैयाको पुस्तक दुईटा मुख्य भागहरूमा विभाजित छ: भाग १ (अध्याय १-३९) र भाग २ (अध्याय ४०-६६)। भाग १ मा ३९ ओटा अध्यायहरू छन् जसरी पुरानो नियममा __________ ओटा पुस्तकहरू छन्। भाग २ मा २७ अध्यायहरू छन् जसरी नयाँ नियममा ___________ ओटा पुस्तकहरू छन्। साथै यशैया ४० (भाग २ को पहिलो अध्याय) को सुरुआत र नयाँ नियमको सुरुआतमा एउटा समानता पाइन्छ; यी दुवै खण्डको सुरुआतमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई भेटिन्छ (यशैया ४०:३)! तुलना गर्नुहोस् मर्कूस १:३।
मानिस हुनुभएकोले उहाँ एक जन्मेका बालक हुनुहुनेछ! परमेश्वर हुनुभएकोले उहाँ दिइनुहुने पुत्र हुनुहुनेछ (हेर्नुहोस् यूहन्ना ३:१६) अनि उहाँ “सर्वशक्तिमान् ___________________” को नामले कहलिनुहुनेछ (यशैया ९:६ मा हेर्नुहोस्)।
१) यशैयाले परमेश्वरलाई देखे! १ पदमा, यशैयाले भने, “मैले _______________लाई ………देखें” र ५ पदमा: “किनकि मेरा _______ राजालाई, अँ, सेनाहरूका ____________ देखे”। जब यशैयाले परमेश्वरको एक झलक पाए, तिनले परमेश्वरको बारेमा देखेको एउटै कुरा के थियो (३ पद हेर्नुहोस्):
२) यशैयाले आफैलाई देखे! ५ पदमा यशैयाले आफूलाई तिनी जस्ता थिए त्यस्तै देखे। पहिले तिनले परमेश्वर कति पवित्र हुनुहुन्छ भनी देखे, र त्यसपछि आफ्नै बारेमा तिनले केहि कुरा सिके। आफ्नो बारेमा तिनले के भने (५ पद)?
शताब्दियौंपछि जब परमेश्वर आफै संसारमा आउनुभयो, उहाँले यर्मियाले जस्तै गर्नुभयो! उहाँले यरूशलेम शहरको निम्ति विलाप गर्नुभयो (लूका १९:४१)। धेरै हिसाबमा येशूको सेवकाइ यर्मियाको सेवकाइसँग मिल्दोजुल्दो थियो। येशूको सन्देश प्रायः बहिरा कानहरूमा पर्‍यो। उहाँका आफ्नै मानिसहरूले उहाँलाई इन्कार गरे (यूहन्ना १:११)। मानिसहरूले उहाँलाई घृणा गरे र यहाँसम्म कि उहाँलाई क्रूसमा टाँगिदिए, तर उहाँले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँ असाध्यै इच्छुक हुनुहुन्थ्यो (“मैले…इच्छा गरें”—मत्ती २३:३७), तर तिनीहरू असाध्यै अनिच्छुक थिए (तिमीहरूले इच्छा गरेनौ—मत्ती २३:३७)।
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:31:532020-04-28 14:35:01यशैया, यर्मिया, विलाप
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png00 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-02-05 14:27:522020-04-28 14:35:01हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठगीत